टिकट लिन आएका यात्रुहरु रित्तो हात फर्के ! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
टिकट लिन आएका यात्रुहरु रित्तो हात फर्के !
दशैँमा घर जाने यात्रु टिकट लिन शुक्रबार बिहानै नयाँ बसपार्क आए पनि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला नहुँदा खाली हात फर्कनुपरेको छ ।
महानगरीय प्रहरी प्रभाग नयाँ बसपार्कका प्रमुख मोहनविक्रम केसीले एकबिहानै टिकट लिन नयाँ बसपार्क आएका यात्रु टिकट नपाएपछि फर्किनुपरेको जानकारी दिनुभयो । “टिकट लिन आएका १०÷१५ यात्रु अहिलेसम्म फर्किसकेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।